Iingcebiso ezivela kwi-Semalt: Ezinye iindlela zokuba ufumane iinkcukacha ezichanekileyo kwi-Google Analytics
Ukuchaneka kweenkcukacha zakho, iinkcukacha kunye neengxelo kwi-Google Analytics zibonisa ezininzi malunga neengcamango zakho zezoshishino kunye nobuchule. Kwimveliso yokuthengisa, i-bots, i-crawlers, kunye nezigulane ziye zachaphazela kakhulu idatha yomsebenzisi ngaphandle kwemvume yazo. UFrank Abagnale, u-8 (Semalt uMphathi weNtuthuko yabaThengi, uthi ngaphandle kwezihlomelo zisetyenzisiwe ngabanini-bhankini ukukhawulela ngaphakathi kunye nebhotile yezithuthi kwiindawo ezivakatyelayo.
Abakwa-Spammers baye besetyenziselwa ukuthunyelwa kogaxekile, i-malware, kunye ne-virus ye-Trojan ukwenza i-traffic kwindawo yakho. Kwiimeko ezininzi, ama-opportunists athobala ubungqina babo ukuba babonakale njengezikhulu eziza kutyelela indawo yakho - prezzo ditrevit k50. Izixhobo kunye neendlela ezahlukeneyo ziye zafakwa ekuncedeni abathengisi bokuqukethwe, kunye nabanini-shishini bahlula umgaqo-mbambano. Ngaphambi kokuba uvimbele i-bots, kucetyiswa ukuba uqaphele ukuba kukho zombini ezilungileyo nezimbi.
Iinjongo ezisetyenziselwa ukuhlawula iibhothi kunye neendlela zangaphakathi
Iinkalo ezininzi zisetyenziselwa ukucoca kwiiwebhusayithi ezinobungozi kunye neendlela zokukhohlisa. Iinkalo ezinjalo ziquka ama-hostnames, ababoneleli ngeenkonzo, indawo kunye ne-Intanethi ye-IP. Ngokomzekelo, umthengisi angasebenzisa isihlunu kunye negama lokusondeza elifanelekileyo ukucoca umfaki wesimo kunye nesitrato..Ukusebenzisa ubuchule bokufakaza ukucoca i-malware, i-virus yeTrojan kunye ne-ghost traffic.
I-Google Analytics igcina kakhulu idatha kunye neirekhodi ezingafakwanga. Emva kokucela ingxelo ethile, i-Google Analytics iphinda ihlaziye idatha yakho, izihlungi ziphuma ngaphandle kwendawo yogaxekile kwaye zitshintshe ithrafikhi ngaphambi kokuhambisa ingxelo kuwe. Iingxelo ezithile zifunyenwe ngokunyusa amacandelo amakhulu okanye ukongeza ubungakanani obukhulu.
Impembelelo Yeenkcukacha ezicatshulwa kwiiNgxelo zakho
I-Google Analytics isebenzisa i-algorithm yesampuli ukucoca kunye nokusampula idatha yakho. Ukucoca idatha kuyenziwa ngokudalwa kweembono ezintathu ezibandakanya umbono ongagqibekanga, uvavanyo kunye nombono ophezulu. Abathengisi ngenjongo yokucoca i-traffic ngokupheleleyo kwiindawo zabo bayacetyiswa ukuba bangazivumeli ukuthumela idatha kwi-Google Analytics.
Umphathi weTekisi yeGoogle unceda abathengi ukuba bahlele i-traffic yabo ngaphakathi kwezithuthi zangaphakathi okanye zangaphandle ngaphambi kokuba ithunyelwe kwi-Google Analytics. Ngaphantsi kwinqanaba elihamba ngeyathelo malunga nendlela idatha ngayo kwi-Google Analytics:
Abahanjethi kunye nabathengi bachane ngekhasi lakho
Imithwalo ye-Google Tag Manager (GTM)
Umphathi wetekisi ugijima kwiGearch Analytics Tag
Ukujonga kwephepha lakho kuthunyelwa kwi-Google Analytics
I-Google Analytics ivula iphepha lakho kwaye iqhuba izihlungi kumaphepha akho
Umbono wephepha ukhangelwe kwi-Analytics view
Nangona kunjalo, inkqubo ehlaziyiweyo ibandakanya kuphela amanyathelo amathathu okuqala. Ngokweengcali, ukusebenzisa i-Google Tag Manager inezinzuzo ezininzi kunye neenzuzo xa kuthelekiswa ne-Google Analytics. Ngokubhekiselele kumathuba amabhizinisi afana nokuthengisa, ukukhangisa, uphando, kunye nezorhwebo, umphathi weTaggi yeGoogle unceda abathengisi ukuba benze imisebenzi eqhelekileyo. Khusela idatha yakho echanekileyo kwi-bots kunye neendlela zangaphakathi kwaye ujabulele iindleko ezinkulu kumashishini akho. Umphathi weTaggi yeGoogle uye wadlala indima ebalulekileyo ekuncedeni abasebenzisi ukuvimba izithuthi ezingafunekiyo, i-malware, kunye negciwane leTrojan ukwenza imizamo yeakhawunti kunye newebhusayithi. Umphathi usebenzisa ulwazi kunye neziguquko zokuvimba isithuthi esingafunekiyo.